သုံးမျက်နှာပြင်ခြောက်ဝင်ရိုးတန်းလပ်ြရြားမြပြိုင်ကားသမားကားယာဉ်မောင်း Simulator - Kydavr-တိုက်ရိုက် VR AR ထုတ်လုပ်ခြင်း,9: D VR,AR Interactive မှ Projection,5D7D ရုပ်ရှင်,အခမဲ့အပန်းဖြေပန်းခြံဒီဇိုင်း.
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » သုံးမျက်နှာပြင်ခြောက်ဝင်ရိုးတန်းလပ်ြရြားမြပြိုင်ကားသမားကားယာဉ်မောင်း Simulator
1. ရှင်းပါတယ်3မျက်နှာပြင်ပြသသူ;
3. 6ပြောင်းလဲနေသောလျှပ်စစ်ဆလင်ဒါ dof;
5. Logitech စတီယာရင်;
6.3 Simulator ဂိမ်းကားမောင်း PC များ.
ထုတ်ကုန်အမည် သုံးမျက်နှာပြင်ခြောက် - ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုပြိုင်ကားသမား အဓိက Metrial သံမဏိ
3 HD ဖန်သားပြင်များ, 130-ဒီဂရီကြည့်ရှုထောင့်လွှမ်းခြုံ.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အသံစနစ်သည်ချက်ချင်းဆွဲငင်အားနှင့်ယာဉ်၏သက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်, လဲခြင်းနှင့်အရှိန်. ယာဉ်မောင်းများသည်တစ်ခါမျှမကြုံခဲ့ဖူးသောထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိလိမ့်မည်.
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုနိုင်ငံတကာ ဦး ဆောင်ပြောင်းလဲနေသောထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုချမှတ်, ဂိမ်းနှင့်အမှန်တကယ်ပေါင်းစပ်ရန်အတွက်လျှပ်စစ်ဆလင်ဒါ၏ ၆ ဒီဂရီလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသည်, ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်, တောင်တက်ခြင်း, စောင်း, လှည့်, လှည့်, လဲကျ, ခုန်, စသည်တို့ကို. , ကားမောင်းထိန်းချုပ်မှု, အသံနှင့်ဗီဒီယို, အသုံးပြုသူများကိုစူပါကိုမှန်ကန်အတွေ့အကြုံပေးရခြင်း simulation
1. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, အာမခံချက် 12 လများ.
3.သငျသညျလျင်မြန်စွာလူ့အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်ဖို့လိုအပ်အရာအားလုံးအတှကျအသုံးပွု, အာရုံစူးစိုက်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခါသမယ, ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းစင်တာအဖြစ်, ပန်းခြံ, စျေးဝယ်စင်တာ, စသည်တို့ကို.
2. တစ်နှစ်အာမခံ, တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
4.အကောင်းဆုံးပြီးနောက်-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများ. On-site ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာများရှိပါတယ်, 1-တစ်နှစ်အခမဲ့အာမခံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်
(1)မေး: 6Dof Motion ပြိုင်ကား Simulator တွင်မည်မျှဂိမ်းများရှိသည်?
(3) မေး: မင်းကစက်ရုံတစ်ရုံလား?
(4) မေး: MOQ ဆိုတာဘာလဲ?
တစ်ဦးက:5- 10 ရက်ပေါင်း.